Chii chinonzi Mashandiro eMuchina Wekuchenesa Zviyo?
SeMuchenesi Mbeu uye Mugadziri weGrader, goverana newe. Muchina wekuchenesa zviyo unoshandiswa kubvisa mashizha, hundi, huruva, uye tsanga dzakasvibiswa kubva muzviyo. Yayo organic tsvina yekubvisa mwero inosvika 90% uye inorganic tsvina yekubvisa mwero inosvika 92%. Iine zvakanakira zvekutaridzika zvakanaka ...